Qondisisa Impembelelo Yokushisa kumaBhetri
Ukuba uhlala kwindawo ehlala ebusika ebandayo, uyazi ukugcina iintambo ze-jumper kwimoto yakho kuba nethuba elihle wena okanye umntu omaziyo uya kuba nebhethri efile. Ukuba usebenzisa ifowuni okanye ikhamera kwimozulu ebanda kakhulu, impilo yayo ibhetri iyahla, nayo. Kutheni iibhetri zikhupha ngokukhawuleza kwiindawo ezibandayo?
Umbane wamandla oveliswe ibhetri uveliswa xa uxhulumaniso lwenziwe phakathi kwamanqamle ayenayo kunye nongendawo .
Xa ama-terminals axhunyiwe, i-reaction response yamakhemikhali iqaliswa ukuba ivelise i-elektrononi ukubonelela ngekhoyo ibhetri. Ukunciphisa izinga lokushisa kubangela ukusabela kwamakhemikhali ukwenzela ukuqhubela phambili, ngoko ke ukuba ibhetri isetyenziselwa ukushisa okuphantsi, ngoku kungaphantsi kwexesha kuveliswa kunezinga eliphezulu lokushisa. Njengoko iibhetri ziwela phantsi zifika ngokukhawuleza apho zingenakho ukuhambisa okwaneleyo okwangoku ukuze ziqhubeke neemfuno. Ukuba ibhetri iyafudumala kwakhona iya kusebenza ngokuqhelekileyo.
Esinye isisombululo kule nkalo kukuba ukwenza amabhetri athile afudumele ngaphambi kokusetyenziswa. Ukucima iibhetri akuqhelekanga kwiimeko ezithile. Iibhetri zeemoto zikhuselekile mhlawumbi xa isithuthi sisegaraji, nangona iinqwelo zokudlala zingadinga ukuba iqondo lokushisa liphantsi kakhulu. Ukuba ibhetri sele ishushu kwaye ikhuselekile, kungenangqiqo ukusebenzisa amandla okubhetri ukuba isebenze i-coil yokufudumala.
Amabhetri amancinci angagcinwa ephaketheni.
Kunengqiqo ukuba neebhetri zifudumele ekusebenziseni, kodwa ikhefu lokukhupha iibhetri ezininzi zixhomekeka ngakumbi kwi-brick design kunye nakumakhemikhali kunexesha lokushisa. Oku kuthetha ukuba ukuba i-current eyenziwe yipropati iphantsi ngokumalunga nokulinganiswa kwamandla kweseli, ke umphumo weqondo lokushisa unokungabi nantoni.
Ngakolunye uhlangothi, xa ibhetri engasetyenziswanga, iya kulahlekelwa yintlawulo yayo ngokukhawuleza ngenxa yokuvuza phakathi kwee-terminals. Le mpendulo yeekhemikhali ixhomekeke kwiqondo lokushisa , ngoko iibhetri ezingasetshenziswanga ziza kulahleka ixabiso layo ngokuthe ngcembe kwiqondo lokushisa ezipholile kunokuba zifudumele. Umzekelo, ezinye iibhetri ezihlawulelwayo zingahamba zijikelezileyo malunga neeveki ezimbini kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo, kodwa zingaphelela ngaphezu kokuphindwe kabini ukude zifriji.
Ngaphantsi kweMiphumo yeHlabathi kwiBhetri
Iibhetri ezinobumba zibambe ixesha elide ngaphezu kweekhethri zebhasi lokushisa ; iibhetri ezitshisayo azithethi kunye neqondo lokushisa okanye ibhetri ebanda. Kukulungele ukugcina amabhetri angasetshenziswanga endaweni epholileyo.
Iibhetri ezibandayo zikhuphe ngokukhawuleza kuneebhetri ezifudumeleyo, ngoko ke ukuba usebenzisa ibhetri ebandayo, gcina ifudumele kwindawo egcinwe kuyo. Ukuba iibhetri zincinci, ukuzigcina ephaketheni lejekethi ngokuqhelekileyo kulungile.
Ezinye iintlobo zeebhetri zichaphazeleka kakubi ngamaqondo aphezulu. Impembelelo yokubalekela ingenzeka, enokubangela ukuba umlilo okanye ukuqhuma. Oku kubonakala kwiibhetri ze-lithium , njengokuba ungayifumana kwi-laptop okanye kwifowuni.
U-Islam uthi ntoni ngokukhetha kwezesini?
Indlela yokudibanisa 'i-Brosser' (kwiBrashi)
Yintoni iMil Gibson yama-10 aphezulu amaFilimu?